Mukusarudza vezvokurapa University muUkraine
Poltava Ukrainian Medical & Dental Academy ane nhoroondo yakanaka. We kushanda kupfuura ipapo 20 gore pamwe vadzidzi vokune dzimwe nyika. vadzidzi International anoda yunivhesiti yedu uye tinoda wako mudzidzi. High unhu European dzidzo ndiyo musimboti redu kubudirira. Ramangwana tichimirira redu vadzidzi vose zvokurapa. Join kumhuri yedu ushamwari yemarudzi!
A zvakanakisisa Chirungu Medical Studies /Poltava Ukrainian Medical And Dental Academy
Rank 1st European STANDARD CHIPATARA ROKUDZIDZISA UNIVERSITY IN UKRAINE
Poltava Ukrainian Medical & Stomatological Academy kupfuura Medical Education mu Chirungu - A yepamusoro dzidzo kupfungwa kudzidzisa vanachiremba, kusanganisira vanachiremba vemazino. The Academy akatanga kushanda ayo 1921 pamwe odontological rorusununguko Kharkiv Medical Academy. mu 1967, Institute vakatamira kuguta Poltava uye zita sezvo Poltava State National Medical University.
mu 1994 Poltava Medical Dental University IV akagamuchira soro nenhanho accreditation uye mamiriro Ukrainian Medical Dental Academy. mu 2004, ari IV accreditation pamwero hwakasimbiswa.
Pari kudzidza panguva Academy of 3615 vadzidzi, 1400 vavo - Vatorwa kubva 42 nyika. Training chiri kuitwa mazino, zvokurapa mano, fakaroti kudzidzisa Vagari vatorwa rorusununguko Graduate Education uye dhipatimendi kwokurovedza pre-yunivhesiti. Pahwaro of YMCA akasimbisa kukoreji inogadzirira wezvokurapa mudonzvo Rokutenderwa uye mudiki.
Mune nemamiriro Academy vaiva 56 madhipatimendi, pfumbamwe vavo - rutsigiro. Medical-Advisory basa kuitwa pamusoro 35 kurapwa madhipatimendi of Academy, iri yakanakisisa kwematunhu uye guta zvipatara Poltava.
The Academy inodzidzisa vanachiremba zvinotevera unyanzvi:
1. Dentistry (7.110106 nokudzidziswa nguva 5 makore)
2. General Medicine (7.110101 nokudzidziswa nguva 6 makore)
3. Pediatrics (7.110104 nokudzidziswa nguva 6 makore)
4. ukoti (5.110102), nguva yokudzidza 2, pahwaro zvesekondari
5. Prosthetic dentistry (5.110109), nguva yokudzidza 2, pahwaro zvesekondari
6.chitoro chemishonga (5.110201)
Sokudzidzisa ari chikoro masikati uye chikamu-nguva kudzidzisa ari masikati (makirasi manheru).
Zvesayenzi zvinogona the YMCA - 82 vanachiremba, 316 PhDs, 75 mapurofesa, 171 sanyina mapurofesa, 2 WeNobel of State Prize rweUkraine, 8 Akaremekedza Scientist rweUkraine, 6 Akaremekedza Doctor rweUkraine. Kwemakore gumi apfuura, Academy akabata kuchinja kuti vabvumirwe kuenda kuyunivhesiti itsva yemakwikwi azvipire nokudzidziswa, kuzozivisa zvemberi Michina kudzidzisa. Uchapupu ichi Academy Award maviri esirivha uye ndarira Medals panguva dzakawanda kuratidzira kuti masangano edzidzo "Modern dzidzo muUkraine - 2001, 2002, 2004."In June 2003, ari Academy akatora chikamu mune chepamusoro kuti dzidzo yepamusoro muzvikoro Ukraine "Sophia pamusoro Kyiv". Nokuti rinoita basa iri chekunatsiridza dzidzo ano Ukrainian Medical Dental Academy akanga paakavapa rimwe Diploma chepamusoro kuti dzidzo yepamusoro nemasangano. Muna category "kunaka chiuru chemakore chechitatu,"Academy akanga paakavapa sirivha Dombo rekare rakanyorwa nezvokukunda uye dhipuroma reInternational Rezvemhosva Rating" Golden Fortune " From 1999 kuti 2009 panguva Academy rakabudiswa pamusoro 710 Zvikomborero dzidzo dzakasiyana zvidzidzo zvesayenzi. Mumakore gore vakagamuchira 106 patents rweUkraine uye Russia. Uye paainyora chirongwa rine zvikoro nomwe zvechikoro: kushanda Kuvhiya uye topographic anatomi, Muzvarirwo physiology, nomumukanwa kuvhiya, zvoutachiona kemesitiri, zvokurwara, dentistry, kurapwa uye experimental pharmacology. Ukireni, sezvo nhengo UN uye UNESCO ari kushingaira zvinobatanidzwa Implementation purogiramu dzakawanda mumunda dzidzo yepamusorosoro. Anobatsira kunyika dzevatorwa kugadzirira kwavo kworudzi utano yevashandi uye Ukrainian Medical Dental Academy. Kuti kuvandudza kurovedza yezvokurapa vemamwe rupi panguva chikoro muna 1992 simba rorusununguko kushanda vadzidzi vokune dzimwe nyika. Zvino kudzidza panguva chikoro 1400 vatorwa kubva 42 nyika zvenyika (England,America,Ayarendi,Mekisiko,Itari,Furanzi,Dhenimaki, Arubhaniya,Arumeniya,Romaniya,Paresitina, Iraki, ,India,Kameruni,Kenya,Naijeriya,Mongoriya,China,Neparo,Iran, Siriya, Moroko, Arujeriya,Jodhani, Pakisitani, Ribhiya, Rashiya, Tekimenisitani, uye nevamwe). Vari nebumbiro zvose kodzero uye rusununguko yaiva mitemo kuitika rweUkraine. Training vokune dzimwe nyika zvizvarwa yaiitirwa maererano zvezvaidzidziswa uye zvirongwa reBazi Redzidzo uye Science uye Bazi Health rweUkraine. vadzidzi International Chinovhunika akamira yakaenzana vadzidzi - vagari Ukraine vari mumakirasi, raibhurari uye kuverenga dzimba, mitambo zvivako, uyewo inoratidza nzvimbo tsika, dzechitendero zviitiko uye mari fraternities. The yedzidzo muitiro inopa vadzidzisi vane basa rinokosha uye ruzivo mune kushanda nezvavatorwa zvizvarwa mukutanga mumatanho yavo kurovedza. Ndapedza, vadzidzi vatorwa vanogamuchira zvitupa neezvitendero dzakawanda. mu 1997. muhofisi WeDhipatimendi wacho akasikwa pachishandiswa regadziriro dhipatimendi kuti zvizvarwa vatorwa. Vadzidzi Preparatory Department vari kudzidza mutauro Russian, nzira yokutaura nesayenzi, mathematics, Physics, kemesitiri, bhayoroji, kombiyuta sainzi, jogirafi. Kazhinji, basa regadziriro dhipatimendi anokanda pa achichinja dzimwe zvizvarwa kurarama uye kudzidzisa muUkraine kujairirana netsika uye tsika Ukrainian vanhu. Kuwedzera Kuwanzoda kune zvimwe post-akapedza Kunodzidziswa Chiuto mune kurapwa internship uye chikoro. Zvino mumadhipatimendi akasiyana mune kumwe kugara kuvandudza unyanzvi hwavo 42 vatorwa - girajuweta mazino uye dzokurapwa mano. More zvikuru navatorwa vapedza mugari wemo uye vanoda kuramba dzidzo yavo chikoro.